Qiimeynta Marcom: Bedelaadda Tijaabada A / B | Martech Zone
Arbaco, Juun 22, 2015 Talaado, July 21, 2015 Michael Grigsby
Marka waxaan marwalba dooneynaa inaan ogaano sida marcom (isgaarsiinta suuqgeynta) waxay u fulineysaa, labadaba sida gaari iyo olole shaqsiyeed. Qiimeynta marcom waa wax caadi ah in la shaqaaleeyo tijaabada A / B fudud. Tani waa farsamo ay muunad aan kala sooc lahayn ay ku soo baxaan laba unug oo loogu talagalay daaweynta ololaha.
Mid ka mid ah unugyada ayaa la baarayaa unugga kalena ma helayo. Kadibna heerka jawaabta ama dakhliga saafiga ah ayaa la barbardhigayaa labada unug. Haddii unugga tijaabadu ka fiicnaado unugga xakamaynta (qiyaasta tijaabooyinka wiishka, kalsoonida, iwm.) Ololaha waxaa loo arkaa mid muhiim ah oo wanaagsan.
Maxaa Kale Wax Loogu Qabtaa?
Si kastaba ha noqotee, nidaamkan waxaa ka maqan jiil garasho leh. Waxba kama fiicna, waxaa lagu sameeyaa faaruq, wax macno ah uma lahan istiraatiijiyadda mana jiraan wax xakameyn ah oo ku saabsan kicinta kale.
Marka labaad, badanaa marar badan, baaritaanka waxaa lagu wasakheeyaa ugu yaraan mid unugyada ka mid ah inuu si kadis ah u helay dalabyo kale, farriimo sumadeed, isgaarsiin, iwm. Imisa jeer ayaa natiijooyinka baaritaanka loo arkay kuwo aan dhammaystirnayn, xitaa kuwa aan caqli-gal ahayn? Marka way tijaabinayaan mar labaad iyo mar labaad. Waxba ma bartaan, marka laga reebo in imtixaanku uusan shaqeyn.
Taasi waa sababta aan ugu talinayo in la isticmaalo dib-u-noqoshada caadiga ah si loo xakameeyo dhammaan kicinta kale. Qaabaynta regression sidoo kale wuxuu siinayaa aragti ku saabsan qiimeynta marcom taasoo abuuri karta ROI. Tan laguma sameeyo meel madhan, laakiin waxay ku siinaysaa ikhtiyaarro ahaan faylalka sida loo hagaajiyo miisaaniyadda.
Aynu nidhaahno waxaan tijaabinay laba emayl, tijaabin iyo xakameyn natiijooyinkuna waxay ku soo noqdeen kuwo aan macquul ahayn. Kadib waxaan ogaanay in waaxdeena sumadeynta ay si qalad ah ugu dirtay warqad toos ah warqad (inta badan) kooxda xakamaynta. Qeybtan lama qorsheynin (annaga) kumana xisaabtamin xulasho la'aan unugyada baaritaanka. Taasi waa, kooxdii ganacsiga-sidii caadiga ahayd waxay heleen waraaqaha tooska ah ee caadiga ah laakiin kooxdii imtixaanka – oo la fidiyay – ma aysan helin. Tani waa wax iska caadi ah shirkad, oo hal koox aysan ka shaqeyn ama la xiriirin cutub kale oo ganacsi.
Marka halkii aan ka baari lahayn oo saf walba uu macaamil yahay, waxaan ku soo rogeynaa xogta waqtiga, usbuucii ayaan dhahnaa. Waxaan ku darnaa, usbuuca, tirada emayllada imtixaanka, emaylka xakamaynta iyo dirista tooska ah ee la diro. Waxaan sidoo kale ku darnaa doorsoomayaasha laba-labarta ah si loogu xisaabtamo xilli, kiiskan saddexdii biloodba mar. SHAXDA 1 waxay muujineysaa liis qeyb ahaan isku-darka leh imtixaanka emaylka oo bilaabmaya usbuuca 10. Hadda waxaan sameynaa qaab:
Qaabka dib u noqoshada caadiga ah sida kor lagu soo saaray wuxuu soo saaraa TABLE 2 wax soo saar. Ku dar wax kasta oo doorsoomayaal madax bannaan oo xiise leh. Ogaysiis gaar ah waa inuu ahaadaa (saafiga) qiimaha laga reebay inuu yahay doorsoomaha madaxbannaan. Tani waa sababta oo ah dakhliga saafiga ah waa doorsoomaha ku tiirsan waxaana loo xisaabiyaa sida (saafiga) qiimaha * tirada.
Ku darista qiimaha doorsoomaha madaxbannaan macnaheedu waa inuu lahaado qiimo labada dhinacba isla'egta, taas oo ah mid aan habboonayn. (Buuggayga, Falanqaynta Suuqgeynta: Hagaha Waxqabadka ah ee Sayniska Suuq-geynta dhabta ah, wuxuu bixiyaa tusaalooyin iyo falanqeyn balaaran dhibaatadan falanqeynta ah.) R2 la isku habeeyay qaabkan waa 64%. (Waxaan tuuray q4 si aan uga fogaado dabinka qafiska.) Emc = emaylka gacanta iyo emt = emaylka tijaabada. Dhammaan isbeddelayaashu waa muhiim heerka 95%.
qashin -949 -1,402 -2,294 12 44 77 5,039
khaldan 474.1 487.2 828.1 2.5 22.4 30.8
saamiga -2 -2.88 -2.77 4.85 1.97 2.49
Marka la eego imtixaanka emaylka, emaylka tijaabada ayaa ka fiicnaaday emaylka xakamaynta 77 vs 44 waana mid aad u muhiim ah. Sidaa darteed, xisaabinta waxyaabo kale, emaylka imtixaanka ayaa shaqeeyay. Aragtiyadan ayaa imanaya xitaa marka xogtu wasakhayso. Imtixaanka A / B ma uusan soo saarin tan.
Shaxanka 3 wuxuu qaadaa isudheerayaasha si loo xisaabiyo qiimeynta marcomm, tabaruca gaari kasta marka la eego dakhliga saafiga ah. Taasi waa, si loo xisaabiyo qiimaha farriinta tooska ah, isku-darka 12 ayaa lagu dhuftay celceliska tirada waraaqaha tooska ah ee la diro 109 si loo helo $ 1,305. Macaamiisha waxay kubixiyaan celcelis ahaan $ 4,057. Sidaas $ 1,305 / $ 4,057 = 26.8%. Taasi waxay ka dhigan tahay in waraaqda tooska ahi ay ku deeqday ku dhawaad ​​27% wadarta dakhliga saafiga ah. Marka laga hadlayo ROI, 109 waraaqaha tooska ah waxay soo saaraan $ 1,305. Haddii buugga lagu iibiyo $ 45 markaa ROI = ($ 1,305 - $ 55) / $ 55 = 2300%!
Sababtoo ah qiimaha ma ahayn mid iskiis u beddelaya, waxaa badanaa la soo gabagabeeyaa in saameynta qiimaha ay ku duugantahay si joogto ah. Xaaladdan oo kale joogtada ah ee 5039 waxaa ku jira qiime, wixii kale ee beddelaad ah ee maqan iyo qalad aan kala sooc lahayn, ama qiyaastii 83% dakhliga saafiga ah.
Lacagta -949 -1,402 -2,294 12 44 77 5,039
macneheedu waa 0.37 0.37 0.11 109.23 6.11 4.94 1
qiimaha -7.20% -10.70% -5.40% 26.80% 5.50% 7.80% 83.20%
Dib-u-noqoshada caadiga ah waxay bixisay beddelaad si loo bixiyo fikrado wajiga xogta wasakhda ah, sida had iyo jeer dhacda nidaamka tijaabada shirkadaha. Dib u soo celinta ayaa sidoo kale bixisa tabaruc dakhliga saafiga ah iyo sidoo kale kiis ganacsi oo loogu talagalay ROI. Dib u noqoshada caadiga ah waa farsamo kale oo ku saabsan qiimeynta marcomm.
Tags: imtixaanka abmarcomqiimaynta marcomfalanqaynta suuqgeyntaisgaarsiinta suuqgeyntaSayniska Suuqgeyntamike grigsbyQaabeynta regression
Mike Grigsby wuxuu ku lug lahaa sayniska suuqgeynta in ka badan 25 sano. Wuxuu ka ahaa suuq geynta agaasimaha cilmi baarista Millar brown wuxuuna soo qabtay xilal hoggaamineed Hewlett-Packard iyo Gap. Isagoo leh khibrad badan oo xirfadle ah safka hore ee sayniska suuqgeynta iyo falanqaynta xogta, wuxuu hadda hogaamiyaa habka falanqaynta tafaariiqda istiraatiijiga ah Bartilmaameedka.
Jul 22, 2015 markay tahay 4:59 PM
Beddel fiican oo ku saabsan arrin la taaban karo, Mike.
Sida aad sameysay, waxaan u maleynayaa inaysan jirin wax isdaba marin ah oo lala wadaago bartilmaameedka usbuucyada dhow. Haddii kale ma yeelan lahayd qalab dib-u-cusboonaysiin iyo / ama waqti-dib u dhac ah?
Jul 23, 2015 markay ahayd 11:24 AM
Qaadashada dhaliishaada ku saabsan hagaajinta wadnaha, sidee qofku u isticmaali karaa tusaalahan si uu u wanaajiyo qarashka kanaalka?